महिनावारी भएको बेला शारिरिक सम्पर्क गर्दा के हुन्छ ? महिनावारीबारे भ्रम र यथार्त (अन्तरवार्ता) – Complete Nepali News Portal
महिनावारी भएको बेला शारिरिक सम्पर्क गर्दा के हुन्छ ? महिनावारीबारे भ्रम र यथार्त (अन्तरवार्ता)
Tika Prasad Amgain May 30, 2019
महिनावारीको बिषयलाई लिएर हाम्रो समाजको सोचाई अझै पनि परिवर्तन भएको छैन । हरेक महिना महिलाहरुले बेहोर्ने यो प्राकृतिक नियमले अझै पनि समाजमा छुवाछुत जस्तै व्यवहार हुने गरेका छन् । कतिपय हाम्रो समजको भ्रमका कारण पनि महिलाहरुले दुःख पाउने गर्छन् । महिनावारीको बिषयमा समाजले चलाएको भ्रम र यसले महिलाहरुलाई निम्ताएको समस्याबारे हामीले बरिष्ठ स्त्री रोग बिशेषत्र डा. इन्दु पुनसंग महिनावारीका बिविध बिषयमा कुराकानी गरेका छौं । बिशेषत महिनावारीको बेला यौन कृयाकलाप, बिरामी, आहार बिहार र आरम जस्ता कुराहरुको बारेमा जुन भ्रम छ त्यसको विषयमा डा. पुनले स्पष्ट पार्नुभएको छ हेरौं यो कुराकानी